Ummanni kanneen Hannaa ajjeesan seeraaf akka dhihaatan gaafachuu itti fufe - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home Fayyaa fi Jaalala Fayyaa fi Hawaasa Ummanni kanneen Hannaa ajjeesan seeraaf akka dhihaatan gaafachuu itti fufe
Kan jibban nama hinhanqatu. Gudeeddaan hangamuu fokkisaa ta’us, dhugaa dubbachuuf biyya keennaaf haarawaa miti. Garuu, gocha shamara ganna 17 nama 5 daanii irratti, magaalaa Finfinnee (FFN) keessatti gudeeduu takkaa hinargine, hindhageenne. Hannaa Laalaangoo gochi gudeeddaa suukkaneessaa ta’e irratti raawwachuu qofaa miti hawaasa biyyaatti guutuu kan rifachiise, mataa lafa laalchise. Gudeeddaa bira ce’ee lubbuun Hannaa harka kashlabbotaatti, roorristootaatti baate. Hanga yeroo dhihootti oduu gocha akkanaa biyyoota biroo irraa nudhaqqaba ture. Amma garuu qe’etti nugalte.
Hannaan magaalaa FFN naannoo kiiloo shaniitii butamtee, nama 5 gudeedamtee daandii irraatti gatamte. Dubreen tuni gara hospitaala zawdituutti geeffamtee yaala hanga tokko argattus, midhaa irra gaye irraa dandamachuu waan hindandeenneef lubbuun isii hospitaaluma keessaati dabrite.
Poolisiin biyyattii shakkamtoota, kanniin gocha gara jabeennaa kanaaf sababa ta’an jedhu hanga tokko too’anna jala oolchuu ibseera.
Biyya keessaatti, magaalaa FFN, hiriirri balaaleffannaa gocha suukkaneessaa kanaa irratti geggeffameera. Mata duree ‘justice for Hana’ jedhuun namoonni heddu daandii irraatti bayanii mormii fi jibbaa gocha akkanaatiif qaban ifatti agarsiisan, dhageessisan. Kanneen gocha kana raawwatan seeraaf akka dhihaatan gaafatan. Obboleewwan biroos gocha wolfakkaataaf akka hinsaaxilame mootummaaf waamicha dhihessisaniiru. Biyyaan alattis ummanni jibbaa gocha kana iratti qaban bifa addaddaatiin agarsiisaa jiru.
Hanga yeroo aabjuun isii gadheewwan shananiin hindukkanaayinitti, Hannaan barattuu kutaa 10 turte. Dacheen isiif haalaaftu jenna.
justice for hana
raping in Ethiopia
Previous articleManni cuunfaa Oromoo New York keessatti beekkamiinsa argate
Next articleLa Liigaa Ispeenitti Maadriid, Baarseloona fi At. Maadriid injifatan. Messiin rikoordii haarawa galmmeessise